Lixda kulan ee ugu wanaagsan ee khadka tooska ah loogu talagalay Android | Androidsis
Eder Ferreño | | Ciyaaraha Android
Waqtigan xaadirka ah waan awoodnaa ka dooro ciyaaro fara badan si aad ugu soo dejiso taleefankaaga Android. In kastoo, qayb weyn oo ka mid ah ciyaarahan ay u baahan yihiin isku xirka internetka. Wax aan mabda 'ahaan dhibaato ahayn. Marka laga reebo markaan ku jirno goob aan lahayn qadka internetka. Tusaale dibada.
Nasiib wanaag waxaa jira ciyaaro badan oo Android ah oo shaqeeya iyada oo aan loo baahnayn qadka internetka. Sidaa darteed, waxaan ku raaxeysan karnaa ciyaar annaga oo aan ka walwalin halka aan joogno. Cod aad u fiican, run? Waxaan hoosta kaaga tagaynaa xulashada ah Ciyaaraha khadka tooska ah ee ugu wanaagsan Android.
Sidan waan ciyaari karnaa markasta oo aan rabno annaga oo aan ka walwalin inaan internetka leenahay iyo in kale. Xulashadani waxay dooneysaa inay ahaato mid aad u kala duwan intii suurtagal ah, markaa waxaan kuu dhaafi doonaa ciyaaro noocyo kala duwan leh. Marka hubaal waxaad ka heli doontaa mid aad jeceshahay. Diyaar ma u tahay inaad la kulanto?
4 burburin Hit
5 Gooryaanka 4
6 Dagaalada joomatari 3
Waxaan ku bilaabaynaa liiska a ciyaar ka buuxa quudhin iyo tallaabo. Goobta ciyaarta, kaymaha ugu xiisaha badan, waxay ka caawisaa sheekada wax badan. Ujeedkeenu waa ogow waxa ka dhacaya kayntan, maadaama wax waliba aysan u qurux badnayn sida la moodo. In kasta oo, jidkayaga aan ku kulmi doonno caqabado kala duwan. Ciyaar madadaalo leh muuqaallo wanaagsan.
Waan awoodnaa Kala soo bax ciyaartaan khadka tooska ah ee Android bilaash ah, inkasta oo ay jiraan wax iibsasho ah.
Ujeeddada aan ka leenahay kulankaan ayaa ah sida ugu macquulsan u hel adigoon lagu dilin. In kasta oo ay tahay inaan soo marno dhammaan noocyada jidadka, mid walbana wuu ka sii dhib badan yahay. Marka waa inaan xirfad yeelo oo aad u dhakhso badan. Gaar ahaan maxaa yeelay haddii aan qaadanno waqti dheer si aan u dhaqaaqno, gorgorkii ciyaarta ku duulaya ayaa na qaban doona.
Un Ciyaarta ugu xiisaha iyo xiisaha badan Android. Soo degsashada kulankaan waa bilaash, in kasta oo aad wax ku iibsato gudaheeda.
Magaca ciyaarta ayaa durba inaga tagay fikrad cad. Anaga waxaan u guurnay horyaalada kubbadda koleyga adduunka ugu fiican. Waxaan dooran karnaa koox isla markaana isku diyaarin karnaa inaan badino inta kulan ee ugu macquulsan. Ciyaar wanaagsan oo loogu talagalay dadka jecel kubbadda koleyga. Waxaan leenahay ikhtiyaar u la tartanta asxaabta, inkasta oo ay taasi jirto waxaad u baahan tahay inaad haysato WiFi ama Bluetooth.
La soo degsashada kulankaan waxay ku kacaysaa 5,49 euro. Qiimo umuuqda mid xad dhaaf ah. Haddii taasi aysan dhibaato ahayn, waa ciyaar isboorti oo weyn oo loogu talagalay Android.
NBA JAM waxaa qoray EA SPORTS ™
Ciyaar aan ku qasban nahay jejebi kareyaal badan intii suurtagal ah. Waxay na siin doonaan xaddi xadidan oo marble ah oo ay tahay inaan u adeegsano si aan u xaqiijino hadafkeena. Waa ciyaar ugu badan madadaalo lehIntaas waxaa sii dheer, dhalada jebinta ayaa ugu nasasho badan. Waxay dareemeysaa wax weyn!
La degsado kulankaan for Android waa lacag la'aan. Inkasta oo sida kuwa kale ee liiskan ku qoran, haddana aan ka helno wax ka iibsasho dhexdeeda.
Kulankaan waxaan waxaan noqonay dixirigeena ujeedkeenuna waa inaan ku garaacno koox naga soo horjeedda dagaal. Nasiib wanaag, waxaan heleynaa liis ballaaran oo hub iyo ficil ah oo aan awoodno. Waxaan u adeegsan karnaa inaan ku garaacno kuwa naga soo horjeeda. Weerarada kooxaha dhexdooda waa kuwo isdaba joog ah. Marka waad sifiican isu diyaarin kartaa.
La soo degsashada ciyaartan qad la'aanta ah ee loogu talagalay Android waxay leedahay qiime dhan 4,99 euro. Intaa waxaa dheer, waxaan ka helnaa wax iibsi dhexdeeda. In kasta oo iibsigu uusan daruuri ahayn in horay loo socdo.
Developer: Kooxda 17 Digital Limited
Dagaalada joomatari 3
Ciyaartan qad la'aanta ah ee loogu talagalay Android waa inaan qarxiya ragga xun. Waxaan la kulannaa cadaw ay tahay inaan qarxino. Waxaas oo dhan ayaa ku jira in ka badan 100 heerar in ciyaarta iska leedahay. Markaa caajisi mayno. Heer kastaa wuu ka duwan yahay dhibkiisuna wuu sii kordhaa waqti ka dib. Intaa waxaa dheer, waxaan haynaa 12 qaabab dagaal oo kala duwan.
Waan awoodnaa Kala soo bax ciyaarta kulankan qalabkeena Android qiimo ah 8,99 euro. Qiimo xoogaa xad dhaaf ah, laakiin haddii aysan caqabad nagu aheyn waxaan wajaheynaa ciyaar aad u xiiso badan.
Tani waa xulashadeena ciyaaraha ugu fiican ee khadka tooska ah ee loogu talagalay Android. Waxaan rajeyneynaa inaad iyaga kahesho mid xiiso leh oo ay jirto mid aad jeceshahay liiskan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Ciyaaraha ugu fiican ee khadka tooska ah ee loogu talagalay Android